musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Corona Negatives Party ine Corona Positives uye Ida Mhedzisiro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • wedzero • Health News • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Akasiyana Nhau
South Tyrol idunhu diki rinotaura chiGerman muNorthern Italy. Nzvimbo yemakomo inoganhurana neAustria. South Tyrol zvakare inozivikanwa ski dunhu kune vashanyi vanobva kuEurope.
A South Tyrolian anozivikanwa kuve anozvimiririra anofunga uye anogona kunge asiri kungosetsa chete asi anoisa hupenyu panjodzi. MaItalian anotaura chiGerman akagadzirira kuita chero chinhu kuti atize vaccination yeCCIDID-19, kusanganisira kubuda munzira yekurwara nehutachiona.
South Tyrolian inopesana nejekiseni iri kusimudzira mapato ekorona. Vanokoka chiverengero chakati chevaenzi vane utachiona kuti vajoine, vafare, uye nechinangwa choga chokutapukirwa.
Icho chirongwa chakarongwa chekusvibisa kuti utore Green Pass muItaly. Iyo Green Pass inopihwa vanhu vakabaiwa uye kune avo vakapora kubva kuCoronavirus.
Nekupfuura kwegirinhi, vanobata vanobvumidzwa zvakare kushanyira maresitorendi, kufamba, uye kunakidzwa nehupenyu hushoma panguva yedenda. Vanhu vanenge vapora havatarisirwi kubaiwa.
Uyu mutambo weRussia roulette-mhando. Tyrolian ane makore makumi mashanu neshanu akafa muAustria mushure mekutapukirwa papati yakadai. Maererano nemushumo weCorriere Della Sera, vamwe vanhu vatatu, kusanganisira mwana vakaiswa muchipatara, vaviri vavo vari mukuchengetedzwa kwakanyanya.
Vachangobva kutapukirwa vanotarisirwa kuparadzira utachiona hunouraya kune vamwe. Zvakare mushanyi asingafungire akapedzisira ave muchipatara aine Coronavirus.
Kuna Arno Kompatscher, gavhuna wedunhu reItaly, aya “ corona mapato ” vari “ zviito zveutsotsi ".
Mapato anozivikanwa zvakare ne "Health Rebellion."
Mumwe aive mubato akaudza bepanhau reItaly:
“Tinosangana kuti tinwe doro kumba kwemumwe munhu ane Covid-19. Chinangwa ndechekuzvitapurira iwe pachako nekuti une chokwadi chekuti uchapora nekukurumidza uye uchakwanisa kuwana iyo Green Pass. Izvi” girinhi ” Health pass chitupa chinobvumira vanhu vakabaiwa kuti vasvike kumabhawa nemarestaurant muItari. Kubva Gumiguru 15, zvinosungirwawo kubasa. "
Iyi inotaura chiGerman mudunhu reItaly ine mwero wepamusoro wezviitiko uye mwero wakaderera wekudzivirira kana uchienzaniswa neItari yese. 9,800 kusvibiswa kutsva kunorekodhwa paavhareji zuva rega rega munzvimbo ine vagari zviuru mazana mashanu chete. Chiyero chekudzivirira i500,000%, pasi peavhareji yenyika.